LED ambanin'ny tany jiro mpamatsy ary mpanamboatra - Shina orinasa - Langxu Lighting.
Home > Products > Street Light > LED ambanin'ny tany fahazavana > LED ambanin'ny tany jiro
1, tontonana vy vyIzy io dia vita amin'ny vy matevina matevina vaovao ary karakarain'ny dingana anti-bozaka. Rano maloto, vovoka, porofo, fanoherana, mateza ary mateza.2, saron-tava fitaratraSarotra fitaratra matanjaka avo lenta, haingam-pandeha ambony, manafintohina ary marefo, fampitana maivana ny......
1, tontonana vy vy
Izy io dia vita amin'ny vy matevina matevina vaovao ary karakarain'ny dingana anti-bozaka. Rano maloto, vovoka, porofo, fanoherana, mateza ary mateza.
2, saron-tava fitaratra
Sarotra fitaratra matanjaka avo lenta, haingam-pandeha ambony, manafintohina ary marefo, fampitana maivana ny manodidina ny 99%, loko marevaka.
3. Ny vatan-jiro aluminium maty
Ny vatan'ny jiro dia vita amin'ny aluminiana avo-hadiva ho faty avo, izay manana hery fanoherana tsara sy fanoherana famoretana. Aorian'ny fikarakarana ny famafazana dia ny IP65 ny rano maloto. Fanamarihana: Ny casing ivelany dia plastika napetaka amin'ny ampahany.
4, anatiny sy ivelan'ny hafanana tavela any aoriana
Ny fonon'ny alumina maty-cast be kalitao avo lenta dia mahatonga ny fahatsapana hafanana mahomby kokoa ary ny famolavolana ny fantsom-pifandraisana dia manome antoka ny fiainana ny serivisy maivana.
ï¿210 * H95mmï¼ å å¾ 156mmï¼ å¼ å 200mm
Ny vy vy vy + vatan-doko vy vita amin'ny vy + fitaratra fitaratra + faritra napetaka
5 degre - 120 degre, fahazoana 60 degre
Lokon'ny hazavana vokatra
Fotsy, fotsy mafana, mena, mavo, manga, maitso, maro loko
Fanomezana maimaim-poana ao anatin'ny 2 taona, fikojakojana ny vidim-piainana
Community, street, square, park, exterior rindrina, sarivongana, signage, haingon-trano anatiny, sns.
Hot Tags: LED ambanin'ny tany jiro, Shina, Manufacturers, mpamatsy, Factory, Wholesale, Buy, namboarina, ao amin'ny staoky, Cheap, Pricelist, teny nindramina, Style